Iyini I Ushizi Kuhle Europe oluyohlala | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Iyini I Ushizi Kuhle Europe oluyohlala
Kuyinto iqiniso elaziwayo ukuthi iYurophu okungcono uya khona ngekhwalithi ushizi. Futhi njengomuntu owayethanda ushizi, cishe ungathanda ukwazi okuyinto ushizi engcono Europe oluyohlala nendlela ukuyithola.
Hamba nathi njengoba siqalisa ngokusebenzisa uhlu ushizi yaseYurophu abachwepheshile lodumo kakhulu. Phendla okuyinto izindawo yaziwa ngokuthanda ushizi ethize. Siphinde sesixoxa ngendlela yokufinyelela lezi zindawo sizikhandle futhi ngesitayela ngesitimela ukwenza ushizi yakho European uhambo omunye awusoze ukhohlwe.
Switzerland iyikhaya phezu 450 izinhlobonhlobo ushizi okuyizinto phakathi ushizi engcono Europe. Its umlando ocebile e ushizi kuziwa ukumangala akekho kusukela Switzerland ine idumela ngokulinganayo umxhwele uma kuziwa ubisi zabo. Ngenxa Switzerland umbukwane intaba, izinkomo ziklaba fresh, utshani ihlanzekile. izinkomo utshani ezikhuluphalisiweyo ukukhipha ubisi okwenza ngisho ushizi flavorful more.
I Emmental omnandi nobumnene ungowenani mhlawumbe omunye ushizi edume kunazo Swiss. Uzothola abenzi Emmental yasekuqaleni ngesikhathi Emmentaler Ushizi Factory Schaukaeserei. Switzerland futhi lapho uzothola ajabulisayo ushizi izimboni ezenza Gruyere, egwadle, Ushizi green, Bembuzi Ubisi ricotta, Bregaglia, futhi Buffalo mozzarella.
Ungakwazi pretty okuningi uthole lekhethelo ushizi Swiss komunye wemizi emikhulu Switzerland ezifana Geneva, Zurich, noma Basel. Ungakwazi ukufinyelela lezi lamadolobha amahle ngesitimela kusuka kwamanye amadolobha eziyinhloko zaseYurophu efana Paris, Berlin, noma Rome. Ukuza emadolobheni amancane adumileyo eyaziwa ngokuthi Umthombo walezi zinto ushizi esihle, ungathatha izitimela ezimbili, omunye okuyidolobha nomunye ukufinyelela emadolobheni.
Lapho ucabanga ngokukhuluma ushizi engcono iYurophu sikunikeze ngokuzenzakalelayo cabanga ushizi French, akungabazeki ukuthi uBrie alube futhi Camembert esihle oyofika engqondweni. Nokho, France futhi waziwa ngokuba Roquefort yayo ocebile, mhlawumbe omunye ushizi eminingi yasendulo. Lokhu ushizi lungolwalabo nge ukunambitheka atholwe.
France futhi iyikhaya Boursin, ushizi alube ukuthi isithandwa labapheki abaningi njengoba sihlanganisa kahle ku izitsha. Chèvre kungenye ushizi abadumile French. Kuyinto bembuzi ubisi noshizi nge ukuthungwa ukuthi izinsiza ezincike engu-ushizi; omdala kuba, the acrid kakhudlwana futhi ocebile ukungaguquguquki yayo. Tomme de Savoie kuyinto inkomo nkampani ubisi noshizi nge bhotela ezinemibala-elingaphakathi gaya esinsundu.
Thola lezi ushizi flavourful French ngokuvakashela amadolobhakazi wakho owathandayo French. Thatha isitimela esiya Paris, Lyon, Marseille, futhi namanye amadolobha eFrance kusukela iningi emadolobheni amakhulu European. Njengoba imthanda ushizi, ungase ufune ngisho ukuvakashela farmhouses lapho bendawo ukwenza ushizi. Lawa kalula efinyeleleka ngokuqhubeka uhambo lwakho kanye usufike emadolobheni amakhulu ngesitimela.
Marseille ukuba Lyon Izitimela
I-Amsterdam eya eLyon ngesitimela
Kuhle Ushizi Europe – Italy
Shizi kakhulu eYurophu itholakala Italy, omunye abakhiqizi emhlabeni ushizi enkulu kunazo zonke emhlabeni. Ezinye ushizi edume kakhulu emhlabeni wonke Italian. Ubani ongakaze ezwe mozzarella, Parmigiano-Reggiano, futhi ricotta? Okunye ushizi emhlabeni esidumile ukuthi isichotho kusuka Italy kukhona Gorgonzola, mascarpone, Provolone, futhi Pecorino. Lezi ushizi okukhiqizwe endaweni kukhona eliphezulu kakhulu futhi usebenzise zokupheka bendabuko.
AmaNtaliyane uthande ushizi zabo kangangobana sibe ushizi engcono Europe imikhosi ayingxenye yendlela yabo. Omunye imikhosi ngobukhulu ushizi iyona Bra Ushizi Festival Piedmont. Sicily igubha "Festival Of ricotta Ushizi” noma ricotta futhi Ushizi Festival unyaka ngamunye. Head Tuscany ngeSonto lokuqala ngo-September nango uMkhosi Pecorino Ushizi ne bendawo.
Thatha isitimela eya eRoma, Florence, Milan, Naples, futhi namanye amadolobha amakhulu lokuphuza ushizi engcono Europe ngokuqondile kusukela abakhiqizi, Londoloza Isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cheese-europe/ - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ushizi #Cheeze Ukudla Izikhangibavakashi travelfrance travelitaly travelswitzerland